Markab la soo Afduubay ayaa caawa la keenay Xeebta Degmada Ayl ee ka tirsan Gobolka Mudug | maakhir.com
Markab la soo Afduubay ayaa caawa la keenay Xeebta Degmada Ayl ee ka tirsan Gobolka Mudug
January 27, 2008 in Somalia
Bosaaso:- War Deg Deg ah oo haatan naga soo gaadhaya magaalada Ayl ee ka tirsan Gobolka Mudug ayaa waxay sheeyaan inay caawa goor dhawayd Xeebta magaaladaasi la keenay Markab la soo Afduubay kaasi oo ay wadaan Budhcad Somali ah,waxa la sheegay inuu markabkaasi yahay nooca Kaluumaysiga.
Warka ayaa intaasi ku daray in Markabkaas laga leeyahay Dalka Cumaan kaasi oo ah nooca kalluumaysiga, waxa la sheegay in markii hore laga afduubay meel u dhaw xeebta magaalada Bosaaso isaga oo la cadeeyay inuu ku soo foolahaa Dekeda magaalada Bosaaso.
Lama sheegi karo shaqaalaha saarnaa markabkaasi caawa la Qafaashay balse waxa jira warar hordhac ah oo Maakhir.com soo gaadhaya kuwaasi oo sheegaya inay saarnaayeen ilaa 16- Ruux oo u kala dhashay Dalalka Cumaan iyo Yeman.
Maamulka Degmada Ayl ayaa cadeeyay inuu markabkaasi yahay mid la soo Afduubay waxayna sheegeen inay wadaan ilaa 8- Nin oo ah kuwa Budhcad badeed ah.
Gudoomiyaha Degmada Ayl Cali Cabdulaahi oo aanu xidhiidh dheeraad ah la samaynay si aanu xog dheeraad ah uga ogaano markabkaasi ayaa noo sheegya inay wadaan baadhitaano xoogan kuwaasi oo lagu bad baadinayo markabkaasi, walaw uu walaac xoogan ka muujiyaya Budhcadaasi oo uu sheegay inay aad u hubaysan yihiin.
Dhawaan ayay ahyd markii Markab laga leeyahay Dalka Jabaan mudo dheer lagu haystay Biyaha Dekeda magaalada Bosaaso halkaasi oo ay sheegeen budhcadii haystay inay doonayaan Lacag madax furasho ah oo dhan Hal Miilyan oo Doolar.
« Shir lagu jeex jeexayay arimaha Deegaanka ayaa maanta Bosaaso ka dhacay
Madaxwaynihii hore ee Dalka Indonisia ayaa maanta Geeriyooday »